गण्डकी Archives - Page 60 of 61 - Dna Nepal
गृहजिल्लामै बाबुराम र नारायणकाजीको भिडन्त ५ आश्विन २०७४, बिहीबार ११:३०
गोरखा, असोज ५ । यसअघिको चुनावमा गोरखा माओबादीको सबैभन्दा राम्रो मतदाता भएको जिल्ला हो । डा. बाबुराम भट्टराई माओबादीमा हुँदा नेपालमै सबैभन्दा धेरै भोटका साथ भट्टराईले दुईपटक सम्म चुनाव जिते । त्यतिमात्रै होईन तीन निर्वाचन क्षेत्र भएको गोरखामा..
कास्की लिग फुटबलमा आउट ४ आश्विन २०७४, बुधबार १७:१४
पोखरा, असोज ४ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आयोजना गर्ने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा यसपालि राजधानीबाहिरका टिम समावेश गरिँदा कास्की भने बञ्चित भएको छ । प्रतियोगितामा १६ टिमहुँदा मोफसलबाट ४ टिम समावेश छन् । आगामी मंसिर १४ गतेबाट हुने..
कोरला–सुस्ता प्रादेशिक राजमार्ग
कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ ? २ आश्विन २०७४, सोमबार ११:३९
पोखरा, असोज २ । देश नयाँ र संघीय संरचनामा अगाडी बढिरहेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहमा सरकार गठन हुनेछ । स्थानीय तहको चुनाव लगभग सकिने चरणमा छ । अब संघ र प्रदेशको चुनावमा तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि मंसिर १० र २१ गते..